सिनेमाको समाजशास्त्र- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
डिसेम्बर २८ मा विश्व सिनेमा १२० वर्ष पुगेको छ । यसै सन्दर्भमा संसारका र नेपालका प्रशंसित केही फिल्मका खट्कँदो पक्षबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
पुस १५, २०७४ अभय श्रेष्ठ
काठमाडौँ — सन् १८९५ को डिसेम्बर २८ मा लुमिएर दाजुभाइका छोटा फिल्म प्रदर्शन हुँदा विश्वभरि हलचल मच्चिएको थियो । तर, यही माध्यम पछि कलाक्षेत्रको सबैभन्दा प्रभावशाली विधा बन्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन ।
लुमिएर दाजुभाइका फिल्ममा स्टेसनतर्फ आइरहेको रेल, बगैँचामा पानी हालिरहेको माली, कारखानाबाट बाहिर निस्किरहेका मजदुरका सट अर्थात् दृश्यांश थिए । दृश्यांशहरू जोडेर दृश्य र दृश्यहरू जोडेर सिंगो फिल्म बनाउने सम्भावनाबारे त्यतिबेला कसैले अनुमान गरेको थिएन । आज विश्व सिनेमा १२० वर्षको हुँदा संसारमा प्रविधिका दृष्टिले मात्र होइन, प्रयोगका दृष्टिले पनि अचम्भित पार्ने फिल्म बनिरहेका छन् । यस आलेखको उद्देश्य त्यसको लेखा उतार्ने नभई संसारका र हाम्रै देशका प्रशंसित केही फिल्मका नउक्काइएका पक्षबारे चर्चा गर्नु हो ।
‘पशुपतिप्रसाद’ को गलत कास्टिङ
दीपेन्द्र के खनालको चर्चित फिल्म ‘पशुपतिप्रसाद’ बारे यत्रतत्र प्रशंसा सुनिन्छ । इटालीको नियोरियलिस्ट फिल्मले झैँ यस फिल्मले पनि नयाँ घटना अर्थात् २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिको मार्मिक चित्रण गर्छ । यो, सिन्धुपाल्चोकबाट स्वर्गीय बाबुको ऋण तिर्ने पैसा कमाउन काठमाडौँ आएर संघर्ष गर्ने भूकम्पपीडित युवकको हृदयविदारक कथा हो । उसका बाबुआमा भुइँचालोले घर भत्काउँदा थिचिएर मरेका हुन्छन् । शव जलाउँदा फालिने सिक्का, चाँदी र सुनका औँठी पाइने आसमा ऊ आर्यघाटवरिपरि भौंतारिरहन्छ । यही चुत्थो काम गर्दा पनि गुन्डा र अपराधी समूहसँग उसले संघर्ष गरिरहनुपर्छ । एक दिन उसका हातमा शवको औँलाबाट निकालेर वाग्मतीमा फालिएको सुनको दामी औँठी पर्छ । तर, त्यही औँठीका कारण भीडद्वारा क्रूरतापूर्वक कुटिएर उसले ज्यान गुमाउनुपर्छ । यसरी दर्शकलाई शोकाकुल बनाएर फिल्म सकिन्छ ।
कथा र अभिनयकलाका हिसाबले यसलाई राम्रो फिल्म मान्न सकिन्छ । यसका निर्देशक, कलाकार र फिल्म स्वयंले अनेक पुरस्कार पाएका छन् । समीक्षकबाट पनि पर्याप्त प्रशंसा पाएको यस फिल्मको एउटा गम्भीर गडबडीले चाहिँ पूरै फिल्मलाई खल्लो बनाइदिन्छ । फिल्ममा एक जना सुन व्यापारी छ जसको भूमिका कीर्तिपुरे नाट्यकर्मी कृष्णभक्त महर्जनले गरेका छन् । आफूले खोजेको कौडीको मूल्यमा पशुपतिप्रसादले औँठी बेच्न नमान्दा भीडसामु उनले ‘यसले मेरो सुनको औँठी चोर्‍यो’ भन्दै लखेट्छन् । यो सुनेर उत्तेजित भीडले कुटेरै उसलाई मारिदिन्छ । अनि उनी मृत पशुपतिप्रसादको मुठीबाट सुनको औँठी थुतेर बाटो तताउँछन् । यसले के प्रस्ट हुन्छ भने निर्देशक खनालले कथाको लोकेसनवरिपरिको समाज र जनजीवन नबुझी, त्यसको अध्ययन नगरी कास्टिङ गरेका छन् । कथामा देखाइएजस्तो काठमाडौँका भव्य सुन पसलका व्यापारी ज्यापू होइन, मारवाडीहरू छन् । काठमाडौँका रैथाने सुनकर्मी व्यापारीहरू मूलत: वज्राचार्यहरू हुन् । तिनका पसल पनि मूल सडकमा होइन, गल्लीभित्र कतै अँध्यारो कुनामा थन्किएका छन् । ज्यापूहरूले सुन व्यापार गरेको त सायदै पाइएला । भए त्यो अपवाद मात्र हो ।
कृष्णभक्त महर्जन जातले मात्र होइन, स्वरूप र चालढालले पनि पक्का ज्यापू देखिन्छन् । यसरी फिल्ममार्फत प्रस्ट सन्देश के जान्छ भने पहाडबाट आएका सोझा ब्राह्मणहरू काठमाडौँमा ‘दुष्ट’ ज्यापूहरूद्वारा ठगिन्छन् र ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्छन् । अनि ‘दुष्ट ज्यापू’ हरू सोझा र इमानदार मृत ब्राह्मणको मुठीबाट समेत सुनको औँठी खोसेर लान्छन् । तर, सत्य उल्टो छ । काठमाडौँका ज्यापू समुदाय श्रममा विश्वास गर्ने, आफ्नो भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाजमा गर्व गर्ने र त्यसलाई जोगाउन सबैभन्दा प्रतिबद्ध नेवार समुदाय हो । चाडपर्व, रीतिरिवाज चलाउने क्रममा बिस्तारै यति सोझा, इमानदार र परिश्रमी ज्यापू समुदायलाई यति क्रूर र दुष्ट देखाउन निर्देशक खनाललाई कुन घटनाले प्रेरित गर्‍यो होला ? अपवाद स्तरमा यस्ता घटना नहोलान् भन्न सकिन्न । अपवादमा त कुकुर वा बाँदरले पनि कार दौडाउँछन्, गोली चलाउँछन् । तर, त्यो सामान्य प्रवृत्ति होइन । लेखक, नाट्यकर्मी र फिल्मकर्मीहरू अक्सर यसरी अपवादलाई सामान्य प्रवृत्तिको रूपमा व्याख्या गर्ने गल्ती गरिरहन्छन् । त्यो स्विकार्न भने तयार हुँदैनन् । यस्तो तर्क सुन्दा पक्कै उनीहरूले ‘फिल्म सत्यकथा नभई फिक्सन भएकाले काल्पनिक कुरा राख्न सकिने’ तर्क दिनेछन् । त्यसोभन्दैमा कुखुराले पाडो पाएको देखाउन त मिल्दैन होला !
‘बाइसाइकल थिभ्स’ र ‘उम्बर्टो डी’
यता, इटालीको प्रख्यात फिल्म ‘द बाइसाइकल थिभ्स’ मा भने यस्तै प्रसंग अत्यन्त मिहिन र विश्वसनीय तरिकाले आएको छ । फिल्ममा व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोहको सुषुप्त तर प्रस्ट संकेत पाइन्छ । सिनेमा सुरु हुँदा निर्देशक भित्तोरियो डेसिकाको क्यामेरा कुनै कार्यालयअगाडि जम्मा भएका बेरोजगारहरूको भीडबाट नायक आन्तोनियोमा केन्द्रित हुन्छ । आफूसँग साइकल भए रोमको ठाउँठाउँमा पोस्टर टाँस्ने काम दिइने जानकारी उसलाई गराइन्छ । साइकलको व्यवस्था गरेर आउँछु भनेर ऊ तुरुन्त घरतिर दौडन्छ । उसकी श्रीमती मलमलका तन्ना र केही कपडा बेचेर साहुकहाँ बन्दकी रहेको साइकल फिर्ता ल्याउँछे । त्यसपछि साँच्चै आन्तोनियोले त्यो काम पाउँछ । एक दिन बाटोछेउमा साइकल अड्याएर आन्तोनियो पोस्टर टाँसिरहेको हुन्छ, त्यसै बेला एउटा युवक उसको साइकलमा कुलेलम ठोक्छ । त्यसपछि हराएको साइकलको खोजीमा उसले के कति हन्डर झेल्नुपर्छ ? पूरै सिनेमा त्यसैवरिपरि घुम्छ ।
साइकल चोरी भएको एक साधारण पुरुषको मनोदशामार्फत डेसिकाले यसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कंगाल रोम सहरको कहालीलाग्दो चित्र उतारेका छन् । लुई बार्तोलिनीको कथा र सिजर जाभात्तिनीको पटकथामा झट्ट हेर्दा त्यस्तो ठूलो कुरा केही थिएन । तर, यसले सिस्टमले व्यक्तिलाई कसरी निरीह बनाउँछ भन्ने सत्यको बेजोड उद्घाटन गरेको थियो ।
डेसिकाकै अर्को प्रख्यात फिल्म ‘उम्बर्टो डी’ लाई प्रख्यात स्विडिस निर्देशक इंगमार बर्गम्यानले आफ्ना सबैभन्दा फेभरिट फिल्मको सूचीमा राखेका छन् । पचासको दशकमा डेसिकाले खेलाएको क्यामेरा अहिले पनि उत्तिकै अनुपम लाग्छ । सरकारविरुद्ध जुलुस र नाराबाजी गरिरहेका वृद्धहरूको क्याराभानबाट नायकमा केन्द्रित हुने उनको तरिका विछट्टै आकर्षक छ । यो, अत्यन्त न्यून पेन्सनले कठिन जीवन गुजारिरहेको एक वृद्ध उम्बर्टो डेमिनिको फेरारीको मर्मस्पर्शी कथा हो । उम्बर्टो बिरामी छ । फाइक नामक कुकुरबाहेक संसारमै उसको भन्नु कोही छैन । युद्धले क्षतिग्रस्त इटालीेले दिने पेन्सन कति कम र अनियमित छ भने त्यसले जीवन धान्नै मुस्किल छ । घरबेटी महिला उसलाई निकाल्न अनेक निहुँ खोजिरहन्छे । सत्तरी नाघेको बिरामी वृद्ध झिटीगुन्टा बोकेर कहाँ जाने अब ? घरबेटीकी नोकर्नी मारिया ऊसँग स्नेह गर्छे । वर्गीय प्रेम भनेको सायद यही हो । तर, उसको पनि हालत खराब छ । ऊ गर्भवती छे । दुई प्रेमीमध्ये गर्भमा रहेको बच्चाको बाबु को हो, उसलाई थाहा छैन । दुवै जना स्विकार्न तयार छैनन् । घरबेटीले थाहा पाएपछि पक्का छ, मारिया पनि निकालिन्छे र सडकमा पुग्छे । किनभने उसको जाने ठाउँ कतै छैन । घरबेटीको कचकच अति भएपछि उम्बर्टो मारियालाई खबर गरेर एक दिन घरबाट निस्कन्छ । फाइक नभएको भए ऊ सायद संसारबाट उबेलै बिदा भइसक्थ्यो । ऊ फाइकलाई कसैको जिम्मा लगाएर हिँड्न चाहन्छ । कोही नभेटिएपछि ऊ त्यसलाई काखमा लिएरै रेलको लिकमा बसेर आत्महत्या गर्न खोज्छ । तर, फाइकले नै उसलाई बचाउँछ ।
डेसिका आफ्ना फिल्मलाई समाजको वास्तविकतासँग एकाकार गराउन स्थानीय सर्वसाधारणलाई नै अभिनय गर्न लगाउँथे । जस्तो कि यस फिल्ममा नायकको भूमिका गर्ने कार्लो बातिस्ती र ‘बाइसाइकल थिभ्स’ को आन्तोनियोको अभिनय गर्ने ल्याम्बार्टो म्यागारोरानी दुवै अव्यावसायिक कलाकार थिए । नवयथार्थवादी सिनेमाको मूल विषय नयाँ घटनाबाट सिर्जित नयाँ यथार्थ थियो । यसले मुसोलिनीको तानाशाही र युद्धले इटालीवासी जनताको जनजीवनमा ल्याएको विपत्तिको मात्र चित्रण गरेको थिएन, चाँडै नै परिवर्तनको आँधीबेहरी आउने संकेत पनि गरेको थियो ।
‘आक्रोश’, ‘अर्धसत्य’ र ‘वासुदेव’
प्रख्यात भारतीय निर्देशक गोविन्द निहलानीको ‘आक्रोश’ र ‘अर्धसत्य’ ले भने नितान्त वैयक्तिक र प्रतिक्रियात्मक विद्रोहलाई प्रश्रय दिन्छन् । हो, समानान्तर फिल्मका रूपमा धेरैले यी फिल्मको तारिफ गरेका छन् । विशुद्ध सिर्जनाका दृष्टिले यी तारिफयोग्य पनि छन् । तथापि यिनमा व्यवस्थालाई अत्यन्त शक्तिशाली र जनतालाई अत्यन्त निरीह पात्रका रूपमा चित्रण गरिएको छ । ‘आक्रोश’ को आदिवासी किसान लहान्या भिखु फिल्मभरि एकै शब्द बोल्दैन, केबल आक्रोशको स्वरमा चिच्याउँछ । उसकी पत्नीलाई जमिनदारका मान्छेले बलात्कारपछि हत्या गरेका हुन्छन् । त्यसको दोष भिखुमाथि नै लगाएर थुनाइएको हुन्छ । अन्त्यमा, बाबुको चिता जलिरहेकै ठाउँमा लहान्या बन्चरो प्रहार गरी आफ्नी कलिली बहिनीको हत्या गर्छ । अभिभावकको अभावमा जमिनदारका मान्छेबाट बारम्बार बलात्कृत भएर मर्नुभन्दा एकैपटक मर्नु जायज छ भन्ने कुरा दर्शकहरू लहान्याको आक्रोशबाट सजिलै बुझ्छन् ।
‘अर्धसत्य’ मा चाहिँ व्यवस्थाले सही मानिसलाई ‘नपुंसक’ बनाइरहेको मार्मिक कथा एक इमानदार प्रहरी अधिकृत अनन्त वेलाङ्करको त्रासदीमार्फत व्यक्त हुन्छ । राजनीतिमा व्याप्त अपराध नियन्त्रणमा सक्रिय हुँदा ऊ स्वयं बारम्बार सजाय भोग्न बाध्य हुन्छ । अन्तत: ऊ सारा अत्याचारको जड एक जना नेताको हत्या गर्छ र प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्छ ।
ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास ‘कट्टेलसरको चोटपटक’ मा आधारित ‘वासुदेव’ को नियति पनि ‘अर्धसत्य’ नायकको जस्तै हुन्छ । प्राध्यापक वासुदेव स्वाभिमानी छ तर गरिब । उसको साथी कुमार दुई नम्बरी धन्दा गरेर चाँडै नै मालामाल हुन्छ । बिस्तारै स्वाभिमान र दुई नम्बरी धन्दाबीच शत्रुता विकसित हुँदै जान्छ । एक दिन वासुदेवकी छोरी, अन्धो बूढो बाबु र पत्नीलाई कुमारले हातपात गरेको खबर पाएर वासुदेव ठीक त्यही शैलीमा घाँटी अँठ्याएर कुमारको हत्या गर्छ जसरी ‘अर्धसत्य’ प्रहरी अधिकृत अनन्तले नेता रामा सेट्टीको हत्या गरेको थियो ।
‘आक्रोश’ र ‘अर्धसत्य’ दुवै भारतमा ट्रेन्डसेटर फिल्म मानिन्छन् । यिनले थुप्रै राष्ट्रिय पुरस्कार पनि पाएका छन् । त्यसैगरी ‘वासुदेव’ नेपालमा उत्कृष्ट यथार्थवादी फिल्म मानिन्छ । खराब व्यवस्थाले सही मानिसलाई कसरी पंगु बनाउँछ भन्ने सत्य पनि यी तीनै फिल्मले मार्मिक भाषामा प्रकट गर्छन् । तर, तीनै फिल्मको समस्या के हो भने यिनका व्यक्तिवादी विद्रोह प्रतिक्रियात्मक मात्र छन् । यिनीहरू समस्याको सतहमा तैरिएर डुबुल्की मार्दै फेरि सतहमै बगेर जान्छन् ।
‘टलकजंग...’ को गडबडी
निश्चल बस्नेतको ‘टलकजंग भर्सेज टुल्के’ को गडबडीचाहिँ गलत कास्टिङ र परिवेशको गाँजेमाजे चित्रणमा छ । टलकजंग... चिनियाँ लेखक लु सुनको मास्टरपिस कथा ‘आह क्युको साँचो कथा’ को नेपालीकरण हो । पटकथाकार खगेन्द्र लामिछानेले यसलाई नेपाली माओवादी जनयुद्धसँग यथाशक्य मिल्नेगरी जोडेका छन् । आह क्यु आफूभन्दा कमजोरलाई हेप्छ, शक्तिशालीको खुसामद गर्छ । उसलाई पनि क्रान्ति गर्ने हुटहुटी छ तर क्रान्तिका लागि गर्नुपर्ने उत्सर्ग, प्रतिबद्धता, साहस र उच्च नैतिकता ऊसँग छैन । चीनमा आह क्युलाई सत्य स्विकार्न नसक्ने र आत्मप्रशंसाबाट नथाक्ने मानसिकताको प्रतीक मानिन्छ । कथामा लु सुनको मूल संकेत भने क्रान्ति गर्नुपर्ने आह क्युजस्तो वर्गका मान्छे नै यति भ्रष्ट र अपरिपक्व भएकैले चीनमा क्रान्ति धकेलिइरहेको छ भन्ने हो । नेपालीकृत कथामा भने आफूलाई हेपेर बोलाइने नाम टुल्केबाट टलकजंग हुन उसले अनेक बितन्डा गर्नुपरेको छ । त्यसकै लागि ऊ युद्धरत माओवादीको पहुँचमा पुग्न चाहन्छ तर कहिल्यै सफल हुँदैन । फिल्मका अन्तिम दृश्यमा, प्रहरीसँगको भिडन्तमा जमिनदारको घरमा काम गर्ने फुली चौधरीबाहेक सबै मारिन्छन् । अन्तत: फुली पनि परिचय फेरेर गाउँ फर्कन्छे । यसरी फिल्मले माओवादी जनयुद्ध राज्यसँग पराजित भएर सकिएको संकेत गर्छ । यथार्थचाहिँ के थियो राजधानी र सदरमुकामबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीको आक्रमणसामु राज्यको प्रतिनिधि प्रहरी सधैँ रक्षात्मक भइरहेको थियो । बरु, माओवादी स्वयं टुंगो नलाग्ने अनन्त युद्धबाट थाकेर राजतन्त्रविरुद्ध संसद्वादी दलसँग सहकार्य गर्न सहमत भएको थियो ।
फिल्मको सबैभन्दा ठूलो गडबडी के छ भने यसका पात्रहरूले बोल्ने भाषा सुन्दा यो गण्डकी आसपासको पश्चिमाञ्चलको कथा हो भन्ने लाग्छ । अनि जमिनदारको चालचलन हेर्दा थारू समुदायलाई कमैया राख्ने मध्यपश्चिम वा सुदूरपश्चिमको कथाझैँ लाग्छ । अझ थारू कमलरी फुलीको भूमिका गर्ने ऋचा शर्मालाई पश्मिाञ्चलका पहाडियाले जस्तै ‘अर्नु पर्छ’, ‘अर्ने नै त्यही हो’ लवजमा बोल्न लगाउँदा झनै गडबडी भएको छ ।
‘नुमाफुङ’ को दिशाहीन विद्रोह
निर्देशक नवीन सुब्बाको चर्चित फिल्म ‘नुमाफुङ’ स्वरूप जति आकर्षक छ, सेन्स भने त्यतिकै गडबड छ । फिल्ममा केटातर्फबाट रुपैयाँ र सुन लिएर बाबुले छोरी नुमाको बिहे गरिदिएको हुन्छ । नुमा गर्भवती हुँदा उसलाई अति माया गर्ने लोग्नेको निधन हुन्छ । बाबुले फेरि रुपैयाँ र सुन लिएर उसको इच्छाविपरीत दोस्रो बिहे गरिदिन्छ । नारी संवेदनालाई पटक्कै नबुझ्ने झगडिया स्वभावको दोस्रो लोग्ने गिरिहाङलाई पनि छाडेर ऊ रिकुटेसँग पोइल जान्छे । अति भएपछि खति हुन्छ भन्ने त उखानै छ । यो नुमाको त्यही अतिविरुद्ध विद्रोह हो । तर, यसबापत रूपौली सुनौली तिर्नुपर्दा माइतीको उठिवास हुन्छ ।
काजीमान कन्दङवाको कथा ‘कारबार कि घरबार’ मा आधारित फिल्मले रूपौली सुनौलीको विकृतिप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्छ । एक भाषा, एक भेषकै फिल्म बनिरहँदा नवीन सुब्बाले ताप्लेजुङको नागी पुगेर स्थानीय लिम्बू संस्कृति, जीवनशैली, हावापानी र सुगन्ध फैलाउने पहिलो मौलिक नेपाली फिल्म बनाएका हुन् । सिर्जनात्मकताका दृष्टिले ‘नुमाफुङ’ लाई अहिलेसम्मको सर्वश्रेष्ठ नेपाली फिल्म मान्न सकिन्छ । तर, फिल्ममा सबैभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै छ । नुमाको अराजक विद्रोहले अनिश्चित भविष्य नै महिलाको नियति हो भन्ने सन्देश दिन्छ । कला–साहित्यले समस्या खुट्याउने हो, समाधान पहिल्याउने होइन भन्ने यथास्थितिवादी दृष्टिकोण राख्ने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र नुमाको अराजक विद्रोहले उसको भविष्य झनै खराब हुने देखिन्छ । उसलाई तेस्रो लोग्ने रिकुटेले धोका दिँदैन भन्ने कुनै आधार छैन । त्यसले नुमालाई मुग्लानमा बेचिदिन सक्छ । अथवा ‘बसाइ’ उपन्यासको रिकुटेले झुमालाई जस्तै गर्भवती बनाएर भाग्न पनि सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा ‘बसाइ’ कै मोटे कार्कीजस्तो उदार प्रेमी बिरलै भेटिन्छ । आर्थिक अधिकारबिना नारी मुक्ति सम्भव छैन । नुमाको जीवन माइतीमा बाबु र घरमा लोग्नेमाथि आश्रित हुनुको मुख्य कारण उसलाई आर्थिक अधिकार नहुनु हो । नुमाले यो कुरा बुझेकी भए ऊ अर्को आवारा स्वभावको रिकुटेसँग पोइल जाँदिनथी । बरु, अत्याचारी लोग्नेसँग पारपाचुके गरेर आत्मनिर्भर हुने कुनै उपाय अपनाउँथी । जब ऊ आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुन्थी, त्यसपछि उसले पाउने श्रीमान् उसको ‘मालिक’ होइन, ‘सहयात्री’ रहन बाध्य हुन्थ्यो । यसरी ‘नुमाफुङ’ ले पीडित नारीलाई अर्को ठाउँमा ‘पोइल जान’ त उत्प्रेरित गर्छ, तर उसको मुक्तिका लागि कुनै योगदान गर्दैन ।
यस्तो तर्क सुनेपछि हाम्रा विद्वान् निर्देशकहरूले एकपल्ट पक्कै अट्टहास गर्नेछन् । अनि भन्नेछन्, ‘त्यसरी त कथानक होइन, बढीमा डकुमेन्ट्री फिल्म बन्न सक्छ ।’ तर, मैले भनेको ‘समाजशास्त्रीय फिल्म’ होइन, ‘समाजशास्त्रीय दृष्टिले उचित फिल्म’ हो । मुख्य चुनौती नै त्यहीँ छ महानुभावहरू, कि समाजशास्त्रीय हिसाबले उचित भएर पनि उत्तिकै रुचिकर फिल्म बनाउनु ।
प्रकाशित : पुस १५, २०७४ ०९:०४
नोबेल पुरस्कार र माध्यम भाषा
कार्तिक ११, २०७४ अभय श्रेष्ठ
काठमाडौं — अंग्रेजीको फाइदासन् २०१६ को नोबेल साहित्य पुरस्कार जापानी मूलका बेलायती उपन्यासकार काजुओ इसिगुरोले पाए । यो पुरस्कार पाउनुअघि नै इसिगुरो संसारभरि यसकारण चिनिएका र पढिएका थिए कि उनी अंग्रेजी भाषामा लेख्थे ।
सन् २०१६ को नोबेल साहित्य पुरस्कार जापानी मूलका बेलायती उपन्यासकार काजुओ इसिगुरोले पाए । यो पुरस्कार पाउनुअघि नै इसिगुरो संसारभरि यसकारण चिनिएका र पढिएका थिए कि उनी अंग्रेजी भाषामा लेख्थे । अंग्रेजीमै लेखेका कारण उनको उपन्यास ‘द रिमेन्स अफ द डे’ सन् १९८९ को म्यान बुकर पुरस्कारका लागि सहभागी हुन पायो र पुरस्कृत पनि भयो । पछि यही उपन्यासमाथि जेम्स आइभोरीले सन् १९९४ मा एन्थोनी हप्किन्स र एम्मा थम्पसनलाई लिएर सोही शीर्षकमा चर्चित सिनेमा बनाए । त्यसको पटकथा स्वयं इसिगुरोले लेखेका थिए । त्यस वर्षको ओस्कार पुरस्कारका लागि आठ विधामा मनोनीत भए पनि सिनेमाले कुनै पुरस्कार पाएन । तर, सिनेमा संसारभरि नै असाध्यै चर्चित र प्रशंसित भयो । त्यसले इसिगुरोको परिचय संसारभरका कला, साहित्यप्रेमीसम्म फैलियो ।
यसअघि नै चारपल्ट उनी म्यान बुकर पुरस्कारका लागि मनोनीत भइसकेका थिए । सन् २००५ मा विभिन्न पुरस्कारका लागि मनोनीत विज्ञान उपन्यास ‘नेभर लेट मी गो’ लाई टाइम म्यागाजिनले सोही वर्षको सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित गर्‍यो । टाइमले नै सन् १९२३ देखि २००५ सम्म प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ १०० उपन्यासमा पनि यस कृतिलाई सूचीकृत गर्‍यो । इसिगुरो यसरी नोबेल पुरस्कार पाउनुअघि नै संसारभरि चिनिइसकेका थिए । यसमा सबैभन्दा बढी योगदान उनले लेख्ने भाषा अंग्रेजीको छ ।
मातृभाषा जापानीमा लेखेका भए यही स्तरमा इसिगुरो चर्चित हुन्थे होलान् ? पक्कै हुने थिएनन् । त्यसको प्रत्यक्ष जवाफ गैरअंग्रेजी भाषी नोबेल विजेताहरूलाई हेरे पाउन सकिन्छ । सन् २००४ मा नोबेल पुरस्कार पाउने अस्ट्रियाकी एल्फ्रिड जेलिनेकलाई नोबेल कमिटीले ‘उपन्यास र नाटकमा आवाज र प्रतिआवाजहरूको सांगीतिक प्रवाह’ का लागि पुरस्कृत गरेको थियो । नोबेल घोषणाअघि विश्वका अधिकांश साहित्यप्रेमीलाई थाहा थिएन, जेलिनेक को हुन् । कारण प्रस्ट छ— अस्ट्रियाकी यी प्रख्यात उपन्यासकार जर्मन भाषामा लेख्छिन् ।
यही कुरा इटालीका डोरियो फो, पोर्चुगलका जोसे सारामागो, जर्मनीकी हेर्टा मुलर, स्विडेनका टमस ट्रान्सट्रोयमर, हंगेरीका इम्रे कार्टेजमा लागू हुन्छ जो नोबेल विजेता मातृभाषी लेखक हुन् । उनीहरूलाई चिनाउन कृतिभन्दा बढी नोबेल पुरस्कार सहायक सिद्ध भयो । जेलिनेक, फो वा सारामागाले आफ्नै भाषामा लेखेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्धि नपाएका होइनन् । ‘पियानो टिचर’ को प्रकाशनपछि जेलिनेक लोकप्रिय उपन्यासकारका रूपमा चिनिएकी थिइन् । सारामागोको उपन्यास ‘द गोस्पेल एकोर्डिङ टु जेसस क्राइस्ट’ र फोका नाटकहरूले पनि विश्वका सुधी पाठकबीच हंगामा मच्चाएका थिए । तर, त्यसका लागि पनि उनीहरूले अंग्रेजी अनुवादकै बैसाखी टेक्नुपरेको थियो ।
नोबेल पुरस्कारका लागि बर्सेनिजसो चर्चामा आउने केही नाम हुन् नाइजेरियाका बेन ओकरी, नेदरल्यान्ड्सका सिज नटवुम, ह्युगो क्लाउस, अल्बानियाका इस्माइल कादार, इजरायलका अमोस ओज, सोमालियाका नुरुद्दिन फराह, अमेरिकाका फिलिप रोथ, जोयस क्यारोल, सर्बियाका मिलोराद पाविभ, पूर्वचेकोस्लोभाकियाका मिलान कुन्देरा, जापानका हारुकी मुराकामी आदि । यीमध्ये अंग्रेजीमै लेख्ने हुनाले ओकरी, फराह, फिलिप रोथ र जोयस क्यारोललाई धेरैले पढेका छन् । अंग्रेजीमा नलेखे पनि राजनीतिक रूपले चर्चित र शैलीका हिसाबले बेजोड मानिएका कुन्देरा र मुराकामीबाहेक अन्य लेखक विश्वका पाठकका लागि लगभग अपरिचित छन् ।
नोबेल पुरस्कार नपाए पनि अंग्रेजीमा लेख्नेहरूको चर्चा पुरस्कार पाउनेहरूको भन्दा कम हुँदैन । जस्तो कि सल्मान रुस्दी नयाँ के लेखिरहेका छन् ? विक्रम सेठले नयाँ उपन्यासका लागि प्रकाशकबाट कति करोड एडभान्स लिए । जेके रोलिङको ‘ह्यारी पोर्टर’ को नयाँ भाग कहाँ पुग्यो ? जेएम कुट्सी, नादेन गोर्डिमेर, टोनी मरिसन के गरिरहेका छन् ? आदि इत्यादि ।
नोबाकोभ र नोबेल
अंग्रेजीमा लेख्ने रुसी उपन्यासकार भ्लादिमिर नोबाकोभको कुरा अझ रोचक छ । उनले नोबेल पुरस्कार पाएनन् । तर, उनको बहुचर्चित उपन्यास ‘लोलिता’ लाई धेरै नेपाली र भारतीय पाठकले नोबेल विजेता उपन्यासका रूपमा पढेका छन् । ‘लोलिता’ का अधिकांश हिन्दी संस्करणमा लेखिएको छ, ‘अश्लीलताको आरोपमा पहिला प्रतिबन्धित, पछि अदालतद्वारा प्रतिबन्ध फुकुवा, नोबेल पुरस्कार विजेता बुहचर्चित उपन्यास !’ नोबेल विजेता भनेर प्रचारित भएकै कारण सुरुमा मैले ‘लोलिता’ अंग्रेजीमा पढेको थिएँ । त्यो छिचोल्न मलाई मुस्किल परेको थियो । पछि मैले त्यसको हिन्दी अनुवाद पढेँ । रातो गातामा सुन्दर युवतीको तस्बिरअंकित त्यो किताब भारतको मनोज पब्लिकेसन्सले छापेको थियो । त्यसमा पनि नोबेल विजेता उपन्यास भनिएको छ । बजारिया प्रकाशनहरूले निकालेका हरेक नेपाली संस्करणमा यही उल्लेख छ । भारतीय ज्ञानपीठद्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक ‘नयाँ ज्ञानोदय’ को बेवफाई सुपर विशेषांक–भाग १ र २ मा पनि यसलाई नोबेल विजेता भनिएको छ ।
नोबेल पाएका भए उनी चर्चित भएको ५० को दशकदेखि उनको निधन सन् १९७७ सम्म हुनुपर्ने हो । लोलिता’ छापिएको वर्ष सन् १९५५ मा आइसल्यान्डका हल्दोर के लाक्सनेस पुरस्कृत भएका छन् । त्यसपछि लगातार पाँच वर्ष क्रमश: स्पेनका जुआन रामोन जिमेनेज, अल्जेरियामा जन्मेका फ्रान्सेली उपन्यासकार अल्बेयर कामु, रुसका बोरिस पास्तरनाक, इटालीका साल्भाटोर क्वासिमोदो र फ्रान्सका सेन्ट जोन पर्सले पुरस्कार पाएका छन् । नोबेल साहित्य विजेताको पूरै सूचीमा नोबाकोभको नाम कतै छैन । चर्चा गरिएजस्तो नोबेल सामान्यतया कुनै कृति विशेषलाई नभई ‘अनुपम उपलब्धि’ बापत दिइन्छ । त्यसो भए ‘लोलिता’ नोबेल विजेताका रूपमा किन प्रचारित भयो ? यो चरम यौन अराजकताको वकालत गर्ने उपन्यास हो । यसमा ३७ वर्षे हम्बर्ट १२ वर्षे सौतेली छोरी लोलिताको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै बलात्कार गर्छ । खुला अर्थतन्त्रको युगमा यस्तो कृतिको बजारमूल्य निश्चय पनि माथि हुन्छ । यसलाई नोबेल विजेता भनेर चर्चा गर्नुमा सायद बजारस्वार्थले काम गरेको थियो । तथापि, अंग्रेजीमै लेखिएकाले तुरुन्तै संसारभरि हंगामा मच्चाउन यो उपन्यास सफल भएको थियो ।
अंग्रेजी भाषामा नलेखे पनि प्रसिद्धिको अर्को कारण राजनीतिक पनि हुने रहेछ । मूल भाषा अंग्रेजी नभए पनि नोबेल पुरस्कार पाउनुअघि नै रुसी साहित्यकार आलेक्सान्द्र सोल्जेनित्सिन संसार हल्लाउने गरी प्रसिद्ध भइसकेका थिए । विभिन्न घटना केलाएर हेर्ने हो भने भन्न सकिन्छ, राजनीतिक रूपमा चर्चित भएकै कारण उनले नोबेल पुरस्कार पाएका थिए । सोभियत सत्ता, त्यसमाथि जोसेफ स्टालिनको शासन चलिरहेका बेला रुसमा बसेरै उनी खुंखार कम्युनिस्टविरोधी थिए ।
सन् २००८ मा उनको निधन हुँदा विश्वभरिका सञ्चारमा एउटा लेखकले पाउनेभन्दा निकै बढी चर्चा भयो । उनी आफ्ना साहित्यिक सिर्जनाको बलले यति धेरै चर्चित भएका थिए त ? होइन, उनको सिर्जनात्मक मूल्यको खास मापन नै भएन भन्दा पनि हुन्छ । रुसी कम्युनिस्ट शासनप्रति अघोर विग्रह र स्टालिनले देश निकाला गरेका कारण उनी चर्चित भए । सन् १९७० मा उनलाई नोबेल साहित्य पुरस्कार दिइँदा त्यसमा उनको सिर्जनात्मक उचाइले भन्दा कता हो कता बढी यही छविले काम गरेको चर्चा चल्यो । यही कुरा रुसकै अर्का नोबेल विजेता तथा प्रसिद्ध उपन्यास ‘डा. जिभागो’ का लेखक बोरिस पास्तरनाकको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
कम्युनिस्ट शासनमा लेखकीय स्वतन्त्रताका दृष्टिले पक्कै केही लेखकमाथि अत्याचार भएकै हो । जस्तो : रुसमै बोरिस पास्तरनाक, मान्देल्सताम, तत्कालीन चेकोस्लोभाकियामा मिलान कुन्देरा र चीनमा थुप्रै लेखक तथा कलाकर्मी । उनीहरूलाई कठोर कारावास वा देश निकालाजस्ता कडा सजाय दिइयो । प्रतिबद्ध साम्यवादी साहित्यकार म्याक्सिम गोर्की र लेनिनबीच विचार द्वन्द्वको राग गोर्कीका ‘बेमौसमी विचार’ मार्फत छताछुल्ल भएकै हो । त्यसो भन्दैमा स्रष्टाको सिर्जनात्मक उचाइ कम्युनिस्टप्रति उसको विग्रहबाट मापन गर्नु शीतयुद्धकालमा नोबेल पुरस्कारको अघोषित राजनीति नै थियो । सोल्जेनित्सिनको मामलामा यही भयो ।
सोल्जेनित्सिनले दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियत लालसेनामा काम गरेका थिए । त्यस क्रममा सन् १९४५ मा उनीमाथि सोभियत सत्ताको विरोध गरेको आरोप लाग्यो र काजाकिस्तानमा उनलाई कारावास सजाय दिइयो । ‘वन डे इन द लाइफ अफ इभान’ मा उनले त्यही अनुभवलाई समेटेका छन् । सन् १९५३ मा उनी क्यान्सरबाट पीडित भए । आफ्नो उपन्यास ‘क्यान्सर वार्ड’ मा उनले त्यही पीडा पोखेका छन् । एक दशक लामो कारावास सजायपछि उनी कम्युनिस्टविरोधी भए । पछि उनलाई देश निकाला गरियो । त्यसपछि उनी पश्चिम जर्मनीको फ्रांकफर्ट गए । त्यसपछि स्विजरल्यान्ड र त्यसपछि अमेरिका । सन् १९७० मा उनलाई साहित्यमा नोबेल पुरस्कार दिइयो । सोभियत संघको भयका कारण स्टकहोममा पुरस्कार लिन उनी गएनन् । चार वर्षपछि उनले यो पुरस्कार ग्रहण गरे ।
साहित्यमा नोबेल पुरस्कार स्रष्टाको असाधारण सिर्जनात्मक प्राप्तिका लागि दिइन्छ । त्यस बेलासम्म सिर्जनात्मक खैलाबैला मच्चाउने त्यस्तो कुनै रचना उनले दिएका थिएनन् । उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध किताब ‘गुलाग आर्किपिलागो’ नै उनले पुरस्कार पाएको तीन वर्षपछि सन् १९७३ मा छापियो । यसमा उनले रुसी शासकबाट पाएको कठोर सजाय र सोभियत संघको शासनमा मानवपीडाको चित्र उतारेका छन् ।
सोल्जेनित्सिनको चर्चाले उनी महान् र असाधारण स्रष्टा हुन् भन्ने भान जोकोहीलाई पर्छ । चर्चा र उत्कृष्टता एकै कुरा होइनन् । उनी नोबेल पुरस्कार पाउने उचाइका लेखक थिए, थिएनन्, त्योसमेत त्यतिकै विवादास्पद मानिएको थियो । नोबेल पुरस्कार पाएकै भरमा उनलाई महान् र असाधारण लेखक मान्ने हो भने संसारका सर्वश्रेष्ठ मानिएका कतिपय लेखकले यो पुरस्कार पाएनन् । उदाहरणका लागि लियो टाल्सटाय, म्याक्सिम गोर्की, आन्तोन चेखब, हेनरिक इब्सेन, समरसेट मम, जेम्स ज्वाइस, डीएच लरेन्स, थोमस हार्डी आदि । लुसुन, बाजेन, आई छिङजस्ता चिनिया लेखक पनि यसबाट वञ्चित भए । के उनीहरू सोल्जेनित्सिनभन्दा कमसल लेखक थिए ? पक्कै थिएनन् ।
माध्यम भाषाको दायित्व
सबैभन्दा तिख्खर अभिव्यक्ति दिन सकिने भाषा मातृभाषा नै हो । सायद, त्यसैले संसारका सबैभन्दा प्रभावशाली साहित्य र सिनेमा गैरअंग्रेजी भाषामै छन् । अत: विश्वसाहित्य वा विश्वकलाको वास्तविक रूप हेर्ने हो भने अंग्रेजी भाषाबाहिर पनि पुग्नु अनिवार्य छ भनिन्छ । नेपालभित्र खस नेपाली भाषाजस्तै अंग्रेजी संसारको ऐतिहासिक बाध्यता हो । विश्वका कुनै पनि कृति अंग्रेजीमा अनुवाद नभई संसारभरिका पाठकले पढ्न पाउँदैनन् । नेपाली राष्ट्रिय भाषाकै सामग्री पढ्न पनि त्यसको नेपाली वा अंग्रेजी अनुवाद नभई सम्भव हुँदैन । फ्रान्सका निर्देशक एरिक भालीले उपल्लो डोल्पा भूमिको मनमोहक कथामा बनाएको सिनेमा ‘क्याराभान’ अंग्रेजी सबटाइटलको सुविधा भएकैले हामीले पनि बुझ्न र मज्जा लिन पाएका हौँ । यही कुरा विभिन्न राष्ट्रका माध्यम भाषाका हकमा लागू हुन्छ । त्यसैले अंग्रेजी भाषा, विभिन्न राष्ट्रका माध्यम भाषा र जिम्मेवार निकायले बिनापूर्वाग्रह, बिनास्वार्थ माध्यम भाषाबाहिरका सूचना पनि न्यायपूर्ण तरिकाले प्रवाह गर्नु अनिवार्य छ ।
पर्याप्त मात्रामा नहोला, त्यो दायित्व संसारको माध्यम भाषा अंग्रेजीले यथासक्य निर्वाह गरेकै छ । नत्र, आफ्नै भाषामा लेख्ने रुसका आन्तोन चेखब वा फ्रान्सका मोपासाका महान् कथा पढ्न पाइँदैनथ्यो जसरी अमेरिकाका एडगर एलेन पो वा ओ हेनरीलाई पढ्न पाइन्थ्यो । न त गोर्की, दोस्तोएब्स्की, टाल्सटाय, पुस्किन, इभान तुर्गनेभ, निकोलाई आस्त्रोब्स्की वा सात्र्र, कामु, काफ्का, लुसुन वा इब्सेनलाई पढ्न पाइन्थ्यो । मार्खेज, मिलान कुन्देरा, मारियो भर्गास लोसादेखि ओरान पामुकसम्मलाई संसारभरि सुलभ बनाएको अंग्रेजी भाषाले नै हो । अझ संसारका सर्वश्रेष्ठ सिनेमाहरू त इटाली, फ्रान्स, रुस, जर्मनी, चीन र इरानमा बनेका छन् । भितोरियो डेसिकाको बाइसाइकल थिभ्स वा उम्बर्टो डी, लुसिनो बिस्कोन्टीको लेओपार्ड वा रोको एन्स हिज ब्रदर्स, फेडेरिको फेलिनीको ला डोल्स भिटा वा द नाइट अफ क्याभेरिया, इंगमार बर्गम्यानको वाइल्ड स्ट्रबेरी, जँ रेनुआको रुल्स अफ द गेम, एलेन रनेको हिरोसिमा मोन अमोर, झाङ यिमुको फ्लावर अफ द वार वा बमन घोबाडीको टर्टल क्यान अल्सो फ्लाईजस्ता सिनेमा अंग्रेजी सबटाइटलकै सहायताले संसारभरि सुलभ र लोकप्रिय भएका हुन् ।
यही कुरा नेपालभित्र यहाँको माध्यम भाषा नेपाली र नेपाली भाषाका सञ्चारमाध्यमले किन निर्वाह गरिरहेका छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । यस्तो हुँदो हो त यहाँ मैथिलीमा लिखित गम्भीर साहित्य सबैले पढ्न पाएका हुन्थे । नेपालभाषाका कविता, कथा र उपन्यासको स्तर पनि सबैलाई थाहा हुन्थ्यो । राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, गुरुङ, अवधी, भोजपुरी आदि भाषाका साहित्य वा सिनेमाबारे अत्तापत्तो नहुने स्थिति रहँदैनथ्यो । आफूलाई राम्ररी अभिव्यक्ति गर्न सकिने मातृभाषा छाडेर लेखकहरू जसोतसो नेपालीमै लेख्न बाध्य हुँदैनथे । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका केही प्रकाशनले यसतर्फ सानोतिनो प्रयास नगरेका होइनन् । हालै मधुपर्क र शारदाजस्ता साहित्यिक पत्रिकाले नेपालभाषा विशेषांक पनि प्रकाशित गरेका छन् । तर, यी प्रयास मरुभूमिमा छिट्ट्याएका बाछिटा मात्र हुन् । अभियानकै रूपमा यी काम नभएसम्म समग्र नेपाली साहित्यको वास्तविक चित्र खुल्दा पनि खुल्दैन ।
प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७४ ०८:३४